Qubanaha » Madaxweyne Farmaajo oo u guuray Madaxtooyada Qaranka.
Madaxweyne Farmaajo oo u guuray Madaxtooyada Qaranka.
Qaban qaabada xaflad lagu maamuusaayo sidii uu xilka madaxtinio ula wareegi lahaa Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saakay ka socota xarunta Madaxtooyada ee magaalada Muqdisho
Xafladda xil wareejinta oo lagu wado in ay madaxtooyada ka dhacdo barqanimada manta,waxaa ka qeybgalaya madax ka socota labada gole,mas’uuliyiin kale oo matalaya beesha Caalamka iyo marti sharaf kale.
Madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh ayaa la filayaa in xafladdaasi kadib uu si rasmi ah xilka ugu wareejiyo Madaxweynaha cusub Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo,oo isla maata bilaabaya howlihii caadiga ahaa.
Munaasabadda caleema saarka ayaa sidoo la kala la qaban doonaa 22-ka bishaanwaxaana ka qeybgalaya ururada bulshada,xubnaha labada gole iyo qaar kamid ah beesha caalamka.